China Exciter manufacturing and Factory | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny exciter vibration dia mifamatotra amin'ny milina sy fitaovana sasany hiteraka hery manetsika, ampahany lehibe amin'ny fampiasana ny vibration mekanika. Ny exciter vibration dia mety hahatonga ilay zavatra hahazo endrika sy habe amin'ny hovitrovitra, mba hanaovana fitsapana hovitrovitra sy hatanjaka amin'ilay zavatra, na hamehezana ny fitaovana fitsapana hovitrovitra sy ny sensor. Ny exciter hovitrovitra dia azo ampiasaina ho singa mampientanentana ihany koa hamoronana milina hovitrovitra, izay afaka mahatsapa ny fitaterana, ny fisavana, ny fametahana, ny famolavolana ary ny fanodinana fasika sy vatokely. Araka ny karazana fientanam-po, ny exciter dia azo zaraina amin'ny karazana herinaratra inertia, karazana electromagnetic, karazana electro-hydraulic, karazana pneumatic ary karazana hydraulic. Ny exciter dia afaka mamokatra hery mitarika unidirectional na multidirectional, mirindra na anharmonic.
Exciter vibration inertial
Ny sakana eccentric dia ampiasaina hamoahana ny hery fanentanana ilaina. Ny exciter vibration inertial miaraka amin'ny hery fanentanana tsy mitongilana (sary 1 [diagram sketch of inertial vibration exciter with unidirectional excitation force]) dia mazàna dia misy shafts roa mihodina sy parady iray miaraka amin'ny tahan'ny hafainganam-pandeha 1. Ireo zana-kazo roa dia mihodina amin'ny mifanohitra fitarihana amin'ny hafainganam-pandeha mitovy.
Ny sakana roa eccentric amin'ny axis dia mamokatra ny herin'ny hery inertia vokarin'ny lalana Y. Rehefa miasa dia miorina amin'ny ampahany mientanentana ny exciter ary ny ampahany mientanentana dia afaka mahazo ny hovitrovitra ilaina. Ny exciter amin'ny vibration inertial izay miharo volo dia ampiasaina amin'ny milina hovitrovitra. Ny vatan-kazo roa an'ny exciter dia entin'ny motera fampidirana roa miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy, ary tsy misy girara, ny zana-kazo roa misy sakana eccentric dia afaka mihodina amin'ny lalana mifanohitra amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny foto-kevitry ny fampiraisana hovitrovitra, mba hahazoana iray- hery fanentanana.
Fanentanana hovitrovitra herinaratra
Ny onjam-pifandimbiasana dia alefa ao anaty coil mihetsika mba hahatonga ny coil hihontsona eo ambanin'ny asan'ny herin'ny fientanam-po elektromagnetika ao amin'ny sahan'andriamby. Ny sahan'andriamby tsy miova amin'ny exciter vibration électrique (sary 2 [diagram skémaise an'ny exciteur vibration électrique]) dia vokarin'ny tondro mivantana mandalo ny coil excitation, ary avy eo ny arus alternating.
Fanadihadiana mekanika amin'ny exciter vibration
Rehefa ampiharina amin'ny coil mihetsiketsika ny herinaratra dia mihatra amin'ny coil electromagnetic excitation tsindraindray ny coil mihetsiketsika, izay mitondra ny tsorakazo ejector hamindra mihetsika. Ny hovitrovitra antenaina dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tsorakazo ejector amin'ilay ampahany faly.
Rehefa miditra ao anaty coil electromagnet ny onja mandalo dia misy hery fifaliana tsindraindray eo anelanelan'ny tapany mientanentana sy ny electromagnet. Ny exciter vibrant electromagnetic ampiasaina amin'ny milina vibration (sary 3 [diagram skema an'ny electromagnetic vibration exciter]) dia mazàna dia misy fotony elektromagnet sy armature misy coil, ary misy lohataona napetraka eo anelanelan'ny vy sy ny armature. Rehefa miditra ny coil AC, na AC miampy DC, na aorian'ny antsasaky ny onja fanitsiana ny pulsa.
Rehefa ampiharina ny ankehitriny, dia azo atao ny mamorona hery manentana tsindraindray. Matetika, ny armature dia miorina mivantana amin'ny ampahany miasa mba hihontsona.
Vibrator hydraulic electro
Ny valizy servo hydraulic dia tarihin'ny exciter herinaratra mandeha amin'ny herinaratra kely hifehy ny mpanelanelana amin'ny tsindry hydraulic amin'ny fantsona. Hery lehibe mampientam-po no vokarina eo amin'ny piston ao amin'ny varingarina hidrolika, amin'izay ireo faritra mientanentana dia afaka mahazo vibration.
Previous: Conveyor SCG Vibrating
Manaraka: Takelaka sivana
Fihetseham-po ho an'ny rivotra
Mpientanentanana mihetsiketsika mamonjy herinaratra
Mpanentana sivana avo lenta
Seza hovitrovitra mihorakoraka amin'ny seza
Fanentanana fanamafisam-peo miangona amin'ny angovo matevina
Fangovitana menaka manify menaka
Mpanentana hovitrovitra ambony
Sarimihetsika Vibration Exciter Circular Vibrating
Mpientanentanana mangovitra amin'ny rano